Umehluko Wobulili Wmphakathini wamaPedi
Isiko sePedi sasihlukanisa kakhulu phakathi kobulili kuwo wonke amazinga. Lokhu kwathinta zonke izigaba zempilo yabo, kusukela emaceleni ukubopha izingubo zabo namadoda asebentisa ama-reef-knots kanye nabesifazane abakhulu-amaqhinga-ukuqala, isimo emndenini nasemphakathini, nokuhlukaniswa kwemisebenzi.
Abesifazane benza umsebenzi wezolimo, futhi amadoda nabesilisa basebenza ngokuphathelene nezinkomo. Ukuphakama kwamadoda kwaqiniswa empilweni yansuku zonke: isibonelo ekudleni amadoda kanye nabafana abaqalisiwe bahlezi ndawonye futhi bahanjiswa kuqala, futhi abesifazane badla nezinye izingane. Abesimame besemthethweni babekhona, futhi kaningi bekhona, abancane abangapheli, futhi kwakufanele bahlale ngaphansi komgcini wesilisa. Lapho abesifazane beshada babecabanga isimo sabo sobuyeni.
Ngako-ke owesifazane ozalwa njengomuntu owaziwayo angase abe umhlonishwa emshadweni futhi athole isikhundla esiphakeme kudadewabo omdala omdala, okwakufanele amkhonze, A akasoze aphakama ngaphezu komfowenu. Ifa kanye nokulandelana kwadluliselwa emgqeni wesilisa, futhi abesifazane babehlala emakhaya abo.
Yilokho, ngezinye izikhathi, kunjalo nanamuhla, Imindeni eminingi, noma kunjalo, ikhetha ukuvumela amadodakazi abo kunamadodana abo ukuba athathe ifa labo amasimu nezindawo zokuhlala, ngoba amadodakazi - ikakhulukazi labo abangaphazanyiswa izibopho zomshado - bacatshangelwa ukuba bakwazi banakekele abazali babo kangcono kunamadodana. Isiko le-Pedi lendabuko lalidlulele kakhulu kunezinye izinhlanga eziningi ezibhekene namadoda ekuhlukaniseni phakathi kobulili, okusho ukuthi izimfanelo zobuningi nokuziphatha komphakathi kubesifazane.
Ukuphoqeleka ukuziphatha okubi - ububhula 'bobusuku' kwahlanganiswa kuphela nabesifazane, futhi wadluliselwa kusuka kumama kuya endodakazini. Ubuqili 'bosuku', noma kunjalo, lufundwa, lungatholakala noma ubani, owesilisa noma owesifazane, futhi lusetshenziselwa ngezikhathi ezithile ukulimaza umuntu.